Didier Drogba : Haddii Mourinho Loo Dhiibi Lahaa Man City, Saddex Ama Laba Koob Oo Premier League Ah Ayuu Haddaba Kula Guulaysan Lahaa. - GOOL24.NET
Didier Drogba : Haddii Mourinho Loo Dhiibi Lahaa Man City, Saddex Ama Laba Koob Oo Premier League Ah Ayuu Haddaba Kula Guulaysan Lahaa.
Halyaygii hore ee kooxda Chelsea ee Didier Drogba ayaa shalay arbacadii si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu gabi ahaanba ka fadhiistay ciyaarista kubbada cagta laakiin aragti uu ka bixiyay Jose Mourinho oo la xidhiidha kooxaha Manchester United iyo Manchester City ayaa noqtay mid hadal hayn reebtay.
Didier Drogba ayaa sheegay in haddii uu macalinkiisii hore ee Jose Mourinho uu joogi lahaa kooxda Manchester City in uu haddaba saddex koob oo Premier league ah uu ku guulaysan lahaa halka aanu hadda wali hal koob oo Premier leauge ah la qaadin kooxda Manchester United.
Didier Drogba oo la hadlayay Daily Mirror ayaa yidhi: “Waxaan filayaa haddii aad Mourinho dhigto Manchester City, in uu laba jeer ama saddex jeer uu horyaalka ku soo guulaysan lahaa. Eedayn ayaad helaysaa sababtoo ah waxaad dhigtay heerka guulaysiga, guulaysiga iyo guulaysiga, isla markaana hadda ma guulaysanaysid ama natiijooyin la mid ah ma helaysid”.
Didier Drogba oo ka sii hadlaya xaalada Mourinho ee Man United iyo tababaryaashii kale ee shaqada ugu horeeyay sanadihii la soo dhaafay ayaa yidhi: “Isagu wali wuu jogaa (Man United), waxaa waajib kugu ah in aad eegto dhamaan tababarayashii Manchester United joogay sanadihii ugu danbeeyay. Ka danbaynta Sir Alex Ferguson wax sahlan ma aha, dhaqaalaha ay hadda haystaan ma aha mid la mid ah kii ay haysteen”.
In Drogba uu sheegay in Mourinho uu laba ama saddex jeer kula soo guulaysan lahaa Manchester City koobka Premier league ayaa dhaliil u ah kooxda Red Devils ee uu hadda Mourinho ku dhibtoonayo wuxuuna haddaba Drogba u muuqdaa mid Man City si cad uga horaysiiyay Man United.
Manchester City ayaa sanadkii labaad oo xidhiidh ah u ordaysa in ay ku guulaysato koobka Premier league halka Manchester United ay dagaal ugu jirto in ay afarta kaalmood ee sare ku soo baxdo iyada oo haddaba aad uga hoosaysa kooxda ay dariska yihiin ee Sky Blues.
Manchester City ayaa kulankii Manchester Derby waxay guuldaro wayn baday kooxda Mourinho ee Man United taas oo keentay in 12 kii kulan ee ugu horeeyay ay Man City awooday in ay 12 dhibcood ka sare martay Man City waana sababta uu Drogba u aaminsan yahay in City ay hadda ka tagtay Man United.